မောင်ရင်ငတေ ** MAUNGYINNGATAY **** မောင်ရင်ငတေ ***: ** အရိပ်များ * ** ကဗျာ
** MAUNGYINNGATAY ****
*** မောင်ရင်ငတေရဲ့ ရင်ထဲစိတ်ထဲရှိသမျှ . ရေးချင်သမျှသော စကားလုံးများကို ရေးချင်သလို ရေးချထားတာပါ၊ ** * **** နှစ်ဆယ်ကျော် အလွမ်းစာများ ** ** *** ငါ့ ရင်ထဲက ဧရာဝတီ အလွမ်းစာများ * ** ** * ရင်ထဲက အတွေးစများ * ** ** **
စကားလုံးကဗျာ အပိုင်းအစများ * *** လက်ရှိ နေထိုင်နေရာ ပါရီမြို့ရဲ့ အကြောင်းပေါင်းစုံ အပါအဝင် ရောက်တတ်ရာရာ ** * အနောက်တိုင်း ** ** * ဥရောပဒေသ အကြောင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကို ** *** **** * * စိတ်ထဲ ခံစားမိသမျှ ရေးပါတယ် **** ** **
** အရိပ်များ * ** ကဗျာ
အရိပ်များ တောရိပ်တောင်ရိပ် အရိပ်များရယ် မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်း တောစိမ်းစိမ်းဝယ် တစက္ကန့် တမိနစ် တခဏတာဟာ တဘဝစာအတွက်တော့ မှတ်သားစရာပါ၊ ရင်နာစရာတွေ မတွေးချင်ဘူးဆိုရင် ရင်မှာ ခံစားရတာတွေဟာ တောတောင်ရေမြေတွေကိုသွားကြည့် မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေကိုသွားကြည့်၊ တမ်းတရ လွမ်းမောရမှုတွေဟာ ရင်မှာ ခံစားရတာတွေနဲ့အတူ ရင်မှာ အပြုံးပန်းတွေ ဝေလာစေလိမ့်မယ်၊ အကယ်၍ သင်ဟာ ခံစားနားလည်တတ်ရင် နားလည်သလို သင်ရဲ့အသည်းထဲမှာ စိမ်းလန်းလို့ စိုပြေလာလိမ့်မယ်၊ သဘာဝဆိုတာကြီးက သင့်ရင်ကို လာမှန်လာရင် သင်လည်း အပြုံးတွေနဲ့ ဝေလာလိမ့်မယ်၊ ဟိုနားသွာလည်း ဒီစိတ် ဒီနားသွားလည်း ဒီစိတ် အဲဒီစိတ်တွေနဲ့အတူတူ တောရဲ့အရိပ် တောင်ရဲ့အရိပ် ဒီအရိပ်တွေက စိတ္တဇအရိပ်တွေကို ပျောက်စေ လုပ်လိမ့်မယ်၊ ……. ……… ……. ……. …… …….. ……. …….၊ အဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ ဒီစိတ်တွေဟာ အရိပ်တွေနဲ့အတူ ကျုပ်ကိုရှိနေစေလိမ့်မယ်၊ ထို့အတူ သူ့ …. ကို ….. ရှိနေစေလိမ့်မယ်၊ (မရငတ) ၁၃၁၀၂၀၁၄
** * တခါကနေ့ရက်များ (၂) * **
နှစ်ဆယ်ကျော်အလွမ်း တခါကနေ့ရက်များ (၂) မောင်ရင်ငတေ ၁၉၀၇၂၀၁၇ နှစ်ဆယ်ကျော်အလွမ်း တခါကနေ့ရက်...
ဘဝထဲကလူသား စပျစ်သီးခူးသမား စပျစ်သီးခူးသမား ၂၀၀၃ (Photo Sai SK) ဒီလ ဒီရာသီက ကောက်ရိတ်သိမ်းပွဲရာသီ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေရဲ့ Le...
** * စပျစ်ဝိုင်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု * ** စပျစ်ဝိုင် စပျစ်ဝိုင်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု ** ဘဝထဲကလူသား ** * စပျစ်သီးခူးသမား ** * စာစုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ( နှစ် ) ရှန်ပိန် ဝိုင် နဲ့...
** နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် .. . လွမ်းချက်ကလွမ်းချက်က ကမ်းက...
** အသည်းနီ * **
** အလွမ်းရယ်ဖြေ ပြေနိုင်မတဲ့လား * **
** မဟာချိုင်အစုန်အဆန် ** *
** ဆောင်းဦးရွက်ကြွေ ဝါထိန်ထိန် သလဲသီးပင် * **
* ** မာရီ အန်တွမ်းနက် သို့မဟုတ် ကိတ်မုန့်စားသူကြီး...
** ဆောင်းမနက် * ** အတွေးစတစ
** Beipanjiang Duge Bridge ** * စိတ်ကူးအိပ်မက်ခရီး...
** လွတ်လပ် * **
** ဆောင်းရယ် ငှက်ရယ် ကောင်းကင်ရယ် * **
** ဆောင်းဦးပုံပြင် * ** ကဗျာ
** မိုနာကိုတိုင်းပြည် * **
** ဆုံချက် * **
** ဆုံချက် ** *
** ပြင်သစ်ဆိုတာ ပါရီဆိုတာ ** *
Moulin-Rouge သို့မဟုတ် ပါရီမြို့ရဲ့ ရဟတ်နီ
** ကြွေချိန်တန် * **
** ကဗျာတပုဒ်တဲ့ ပါရီရေ ** *
ငါ့ ရင်ထဲမှာ ဧရာဝတီ
ပေါ်တို လိစ်ဘိုဝါမှတဆင့် မာဒရစ်ဆီသို့
ပါရီ Je t’aime (Pictures)
မောင်ရင်ငတေ စာစုများ (ပီဒီအက်ဖ်)
Je t’aime (Pictures)
ဆေးရောင်စုံ .. …. မြင်ကွင်းကျယ် . ..